verizon & apos; s mobile recovery inoita kuti iwe uwane yako yakarasika kana kubiwa smartphone
Kuru Nhau & Ongororo Verizon & apos; s Mobile Kudzoreredza iwe kuti uwane yako yakarasika kana kubiwa smartphone
Verizon & apos; s Mobile Kudzoreredza iwe kuti uwane yako yakarasika kana kubiwa smartphone
56% yevaridzi vefoni vanorasikirwa kana kuisa zvisirizvo mudziyo wavo kamwe chete pamwedzi. Asi kana iwe uri mutengi weVerizon uyo akasaina kune anotakura & apos; s Yese Zvishandiso Zvekushandisa, iwe unogona kuwedzera Big Red & apos; s itsva Mobile Kudzoreredza hurongwa mahara. Iyi sevhisi inoita kuti iwe uwane yako yakarasika kana kubiwa smartphone. Kutanga, alarm inonzwika iyo inokuzivisa iwe kana chishandiso chiri padyo. Ukasanzwa alarm, Mobile Kudzoreredza inokutora iwe kuenda kunharembozha nzvimbo yekupedzisira uchishandisa GPS uye ichikupa iwe kutendeuka nenzira dzokutendeuka dzinokutungamira wakananga kuchinhu. Kunyangwe kana foni yakadzimwa kana bhatiri rakafa, Nhare Yekudzoserwa icharamba ichikupa iwe chimbo & apos; s nzvimbo yekupedzisira inozivikanwa.
Ngatiti yako Storm2 yakabiwa uye iwe uine epamusoro zvakavanzika mafomura eCoca-Cola neKentucky Fried Chicken pairi. Kutenda kusevhisi Yekudzosa sevhisi, chero ruzivo rwakashata parunhare runogona kudzivirirwa nekukiya ruoko. Nhare dzenhare pane yako yekunyora runyorwa yaunoda kuramba yakavanzika inogona kudzimwa kure. Kana iyo foni isingakwanise kuwanikwazve, kuisa chikumbiro pamwe neyako Zvese Zvishandiso Kudzivirirwa kunogona kutungamira kuchinzvimbo chinotsiva mumaoko ako nekukurumidza zuva rinotevera.
Kana iwe uri mutengi weVerizon neTotal Equipment Coverage, tungamira kumusoro kune sourcelink kusaina kweMafoni Kudzoreredza. Kwete chete iyo yemahara, asi inogona kungokuponesa kubva mukuwedzera kunoenda pamwe nekurasikirwa nefoni yako .. Tarisa uone rumwe ruzivo rwehupenyu nezve sevhisi nekudzvanya izvi batanidzo .
mitambo yekurwa yakanakisa ye iphone
Samsung inounza zvakavanzika zvinhu zveGlass Note 20 Ultra 5G
Iyo Jabra Elite Inoshanda 65t isina waya mahedhiyo ari kutengeswa chete $ 49.99 chete nhasi
Mashandisiro aungaita foni yeApple sechengetedzo kamera kana mucheche mucherechedzi
Kana iwe uchida kuchengetedza yako Android foni neanti-hutachiona app, iwe unofanirwa kutevedzera mumwe wakapusa mutemo
JMeter Dzidziso: Kuedza REST Webhu Services
T-Mobile & apos; s inokasira 5G network kufukidza zvirongwa mu2021 tora & apos; yakakwidziridzwa '... ye2023
Samsung Galaxy Cherechedzo 10+ vs Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S6 & S6 kumucheto ficha zviri nyore kushandisa zvemunwe kudhinda sensors